Hevitra fivoriana ho velona Holm, amin'ny Österström | Holmbygden.se
Hevitra fivoriana ho velona Holm, amin'ny Österström
Posted on 14 Janoary, 2013 ny Holmbygden.se
Ny Alarobia, tonga ny fotoana ho an'ny vaovao momba ny hevitra-fivoriana Holm ny Hoavin'ny.
an-toerana: Österströms Estate.
Time / Date: Alarobia 16 Janoary amin'ny. 19:00.
Dia tonga soa rehetra mba hihaino sy hiresaka mihoatra ny steaming kapoaky ny kafe!
Ho anareo izay tsy nanatrika ny fivoriana teo aloha Niresaka ankoatry ny zavatra hafa. turbines manomboka fanorenana O. nanao Peng, hjärstartaren, livräddar fiofanana amin'ny Holm Vallen, Lucia ho avy ny fankalazana ao am-piangonana. Mety mba hanafatra entana an-trano avy any Liden.
Ny tompon-tany sy ny nonresidential liana dia tonga soa! Manantena izahay fa ho maro ny sitrapony sy manao tsara ny fiaraha-miasa hanohy miforona ao amin'ny distrikan'i Holm.
FANAMPIM-PANAZAVANA ny zavatra resahina tatỳ aoriana tao amin'ny paroasy-trano 5/12
Tsindrio eto raha hijery ireo.Close.
Nisy olona, ​​izay ao amin'i Ica Kovland dia liana Ica efitrano Holm.
Göran Loviken manontany tena raha azo atao ny mindrana AED ny zava-nitranga Gimåfors. Eny dia ho faly ho aiza izany sahirana. Frisk Olle dia manana planina ho fototra / tahirim-bola hitantana defibrillator sy ny vola mifandray amin'ny ity.
16 Desambra, ny fanofanana amin'ny Thomas Åslin momba ny SMS vaovao lifesaver.
Ny rivotra turbine no resahina bebe kokoa.
HBU dia haka ny fivoriana momba. ampiarahina iombonana amin'ny ara-toekarena ny rivotra turbine s.c.. nanao Peng.
Hiezaka izahay ny manasa Björn Norling, mittlandia angående leaderprojekt I Holm.
Calendar hita ao amin'ny holmbygden.se/kalender izay rehetra fikambanana hametraka fivoriana sy fiaraha-mientana. Azonao atao ny mahita ny kalandrie araka ny tsy fifandonana tamin'ny fikambanana hafa fivoriana sy fiaraha-mientana alohan'ny fametrahana ho any.
Important raikitra telephony, ny fanomezan-toky. Ny andraikitry kaominina. fiarovana fanairana.
Bad endriky ny Holm Österström amin'ny mahantra fifandraisana tambajotra sy ny Internet. Ny olona izay efa comviq ankoatry ny zavatra hafa. manana fandrakofana ny mahantra eto. Afaka ny hahazo tsara kokoa ny fifandraisana?
Tommy mijery ny Leaderboard tetikasa.
Janne vinroth fijery ara-toekarena eo amin'ny fikambanana Ang. nanao Peng.
Gunilla miresaka amin'ny Ica Kovland ny liana amin'ny efitrano Ica Holm
Lars-Goran antso Ica tsary Ang. Mba hanafatra sakafo sy mahazo ny Holm.
Next fivoriana: Alarobia 16:y janvier KL:19.00 amin'ny Österström.